CAYAYAANKA UGU WEYN EE GEEDAHA TUFAAXA, SIDA LOO ILAALIYO GEEDKA TUFAAXA CAYAYAANKA WASAKHAYSAN - GEED GEEDEEDKA
Si aad u hesho goosashada wanaagsan ee tufaaxa inta badan ka hortagaan cayayaanka geedaha tufaaxa, taas oo ay leedahay badan oo. Sidaa darteed, dhammaan kuwa ku koraan geedo tufaax ah ee beerta, waa muhiim in la ogaado dhammaan cayayaanka cayayaanka ee geedkan.
Sida loo ilaaliyo geedka tufaaxa ee sawfly
Cayayaanka iyo kumbuyuutarada Apple waa adag tahay sababta oo ah way adag tahay beerta aan duudduubnayn ee lagu aqoonsado cayayaan cayiman si loo doorto waxqabad tayo leh si loo tirtiro. Gaar ahaan, haddii aad aragto cayayaan cayayaan ah geedo tufaax ah, waxay noqon kartaa sawfly.
Aqoonsi sawfly waxay noqon kartaa waxyeello: waxa ay saameeysaa kaliya ugxan-yar yar ee midhaha, kuwaas oo si dhakhso ah u cunaa asaasiga. Tilmaamaha dibadda ee cayayaanka tufaaxan waxay la mid yihiin shinni, laakiin dhererka dhererkeedu wuxuu yaryahay 0.7 cm. Sawfly la'aanteed dhibaato la'aantu waxay ku dhacdaa xitaa kuleylaha ugu daran ee ciidda beerta beerta, iyo horeyba 5 maalmood ka hor beerashada ubaxyada beertiisa ay soo baxaan oo bilaabaan inay jiifaan ukumaha ku jira burooyinkeeda iyo ubaxyada geedka tufaaxa. Si wax ku ool ah loo xakameeyo sawirrada, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso xaqiiqooyinka soo socda:
cayayaanku uma baahna dhirta deriska ah, sidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in la hirgeliyo oo keliya waxyeellada;
Waxyeellada ugu weyni waxaa keena dadka qaangaarka ah, kuwa ukumo iyo cidda ay u baahan tahay in ay bilawdaan dagaalka ka hor inta uusan beerta bilaabin;
dirxiga ayaa si wax ku ool ah loo burburin karaa kadib marka ay ugxan-dusha ka soo baxdo geedaha.
Marka sawfly ka muuqato geedka tufaax, geed ayaa lagama maarmaan ah ku buufin xalka la leh Chlorofos ama Karbofos (labadaba).
Si aysan cayayaanku u dhali karin geedkii mabda 'ahaan, waxaa muhiim ah in si joogta ah loo dabciyo ciidda hoosteeda geedo midho leh. Xilliga jiilaalka iyo horraanta gu'ga, waxaa lagu daadin karaa iyadoo si buuxda loo leexiyo lakabyada dhulka si ay u xaddidaan helitaanka hawada dirxiga.
Cabbiraadyada la dagaallanka ubaxyada tufaaxa
Flowerbird - Kani waa bug caleenta caleemo leh, oo leh qiyaas yar, laakiin waxaa lagu barbaaray qulqul dheer. Waxay u muuqataa wax badan oo ka horeysa sawfly waxayna kufirtaa burooyinkeeda iyo burooyinkeeda geedka tufaaxa, taas oo markaa aanad beeran.
Haddii uu dhab ahaantii ku dhuftey beertaada, juice wuxuu bilaabi doonaa inuu ka soo baxo burooyinkeeda, iyo burooyinkeeda iyo caleemuhu waxay ku sii jiri doonaan xaalad qalalan. Lametetka ubaxa waa khatar ah sababtoo ah waxay udhaxeysaa caleemaha dhacday iyo jilif ee geedo midho leh, iyo ka dib dhaawac kelyo ah wuxuu ku noolaan karaa geed on bil kale, quudinta on horey u faafay caleemo.
Sidaa darteed si looga hortago cayayaanka xilliga dayrta waa muhiim in laga saaro caleemaha ka soo baxa geedka hoostiisa oo gubanaayo. Sidoo kale waa in la daryeelo weelasha dhirta.
Waa maxay in la buufiyo tufaaxa laga bilaabo qashinka ubaxa? Ujeedadaas waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo Xalka Chlorofos wuxuu kiciyey 0.2%.
Laakiin buufinta wax ku ool ah waxay noqon doontaa oo kaliya haddii la fuliyo ka dib marka buro jabo. Laakiin haddii aad ku aragtay cayayaanka hore, waxaa lagu talinayaa in laga gooyo geedkii ilaa kan dushiisa iyo cayayaanka la soo ururiyay ee biyaha ku qulqulaya. Mid ka mid ah qaabsocodyada noocan oo kale ah waxay noqon doonaan kuwo yaryar, sidaa darteed waa in lagu celiyaa 3-4 jeer ilaa heerkulku kor u kaco +10 ° C.
Waa muhiim! Waa muhiim inaad ka hortagto muuqaalka cayayaanka on geedo tufaaxa, tan iyo xitaa buufinta ku guulaysiga ma caawin doono qayb ka mid ah dalagga. Sidaa daraadeed, waxaa muhiim ah in si joogta ah loo beero carrada agagaarka jirkiisa, isaga oo cadeynaya, daweynaya boogaha iyo ka saaraan qaybaha ay saameeyeen ee jilif. Sidoo kale ha ilaawin laamaha gooyaa.
Sida loo ilaaliyo dhirta laga bilaabo aboor ku qaylinaya
Malaha cayayaanka ugu khatarsan ee dalagga tufaaxa waa codeynta aboorka, taas oo ku dhufta oo burburiso tufaax, iyaga oo ka hortagaya xataa xataa gaaritaanka qaangaadhka. Wajiyadu waxay ku jirtaa jilicsan, iyo xilliga ugxansiisku ku koraan geedka tufaaxa, waxay ku maareynayaan in ay ka badbadaan marxidhka daboolka (waxaa lagu gartaa midabada baalasha midabka madow oo madow) oo mar dambe noqda midab casaan. Kaliya hal wicitaan oo tufaaxa shakhsi ah ayaa awood u leh inuu burburiyo ilaa 3-4 tufaax.
Waxyaabaha ugu xun waxa weeye in aysan suurtagal ahayn in aan aboor ku dhicin marxaladda markii ay horey u soo jiidhin midhaha. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in laga sameeyo geedaha laga bilaabo horraanta guga ka hor inta aanuu ubaxu bararin oo ukun la dhigo. Si taas loo sameeyo, waxaa muhiim ah in la nadiifiyo dhammaan cayayaanka dhintay oo ka soo gooyay geedkii oo gubi.
Horeba ka dib markaad ubaxdo geedka tufaaxa ayaa u baahan doona ku buufinta kalsiinka arsenik, 30 garaam oo ay tahay in lagu qaso 40 garaam oo lime ah oo lagu qasi karo 10 litir oo biyo ah.
Laakiin midhahaas horey u waxyeeleeyey, waa in lagu aasaa dhulka. Haddii uu waxyeelo yaryahay, markaa tufaaxa waa la baabi'i karaa, oo hore loogu daaweeyey biyo karkaraya. Warqadaha lafaha ah ee Apple Waxa kale oo ay waxtar u leedahay in ay soo gasho dharka maro lagu rusheeyey qasacadeysan, kvass ama farmaajo, oo waxay dhagaxday laanta.
Sida loola dhaqmo gaashaanka tufaaxa
Cayayaanka noocan ah sida tufaaxa shchitovka, waxyeello ma aha oo kaliya midhaha, laakiin sidoo kale geedka laftiisa, sababtoo ah cayayaanka yar yar waa cayayaan ka mid ah geedka tufaaxa geed, nuugo juuska ka baxsan. Natiijo ahaan, geedka tufaaxa waa uu daciifsan yahay wuxuuna bilaabaa in uu ku dhaco kansarka madow; jirridda jilibka waxay sidoo kale bilaabaan inay caddibaan.
Cayayaanka Tani waxay si aan kala go 'lahayn uga baxaan hoygiisa ee geedka tufaaxa, iyo guga hore ee guga ayaa ka dhigi kara geed, kaas oo si firfircoon u burburinaya geedka.
Si looga hortago faafinta geedka tufaaxa, tallaabooyinka looga hortagayo waa in lagu dabaqo marxaladda marka dirxiga uu soo kici karo. Wakhtigan Geedka waxaa lagu buufin Karbofos ama Metaphos (marka la eego diiradda aan ka badnayn 0.2%).
Hase yeeshee, tani ma oggolaan doonto in ukumaha laga saaro, ilaa burooyinkuna ay ku guuleysteen geedkii tufaaxa oo weliba ku rusheey "Nitrafen" marka la fiiriyo 2% (waxaad sidoo kale isticmaali kartaa xal of 1% xal "DNOC").
Maxaa la sameeyaa haddii geedka tufaaxa lagu weeraray aboorka hawada
Dibedda aboor ku shaqeeya waxay u egtahay xayawaan aad u yaryar, oo leh wingspan oo aan ka badnayn 0.6 cm iyo dhererka jirka oo aan ka badnayn 0.5 cm. Khatarta ay ku sugan tahay xaqiiqda ah in cuntada ee cayayaanku yihiin caleemaha cagaaran ee geedka tufaaxa.
Tijaabadu waxay ku badantahay caleemo khafiif ah iyo jilif jaban, sidaas darteed, waxaa kale oo loo tixgelin karaa cayayaanka qoyan cufan, taas oo aan si xoog leh u burburin.
Si looga hortago dhalmo ee aboorka haweenta, xitaa ka hor inta ubax waa muhiim ku buufin geed leh cayayaanka, kaas oo ku habboon:
Waa muhiim! Dhab ahaantii, dhammaan diyaargarowga kor ku xusan oo loola dagaallamo aboorka haweenta hawada ayaa kaliya waxtarka kaliya ee dagaalka lagaga soo horjeedo dhalinyaro, taas oo ah sababta ay muhiim u tahay in la fuliyo buufinta sida ugu dhaqsaha badan. Haddii aad ku aragto cayayaan wali ku jira xaalad balastar ah iyo burooyinkeeda dhirta aan weli la kala dirin, isticmaal "Nitrafen", "Oleocuprite" ee lagu shaqeynayo. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la burburiyo arachnids, taas oo diirada foomka on dhabarka caleen kasta.
Siyaabaha loola dagaallamo aboorka tufaaxa
Cayayaanka Tani waxay muujinaysaa dayrta, marka beeralayda sida caadiga ah iloobo iyaga. Aboorka Apple waxay ka dhigan yihiin dhirbaaxo, baalashiisu waa 3 cm oo cabbir ah oo leh midab jaale-huruud ah (keliya oo lab ah ayaa ku kala duwan cabbirkaan, dhedigga ayaa yar yar).
Laakiin waxay waxyeelladooda ugu weyn ka geystaan ​​guga hore, inkasta oo aanay si fudud u ogaanin. Waxay si fudud u dhaqaaqaan inta u dhexeysa caleemaha iyo si tartiib ah caleemaha, burooyinkeeda iyo ubaxyada. Laakiin haddii guul darradu tahay mid aad u ballaaran, qalfoofka caleen kaliya ayaa ku sii jiri kara geedka tufaaxa.
Ka dib markii ubaxyada geedka tufaaxa, xayawaanku badanaa waxay u soo baxaan ciidda halkaas oo loo yaqaan 'pupae' oo abuuray, oo kaliya bilihii Sebtember waxay bilaabaan inay ka duulaan hoyga.
Sida loola dagaallamo aboor ku xeeldheer ka soo ururiyaan siiyay geedahasidoo kale geeddi-socodka xitaa ka hor inta aan la nadiifin laga bilaabo cayayaanka dhirta tufaaxa - "Nitrafen" ama "Olekupkrit". Marxaladaha dambe, karbofos, xisaab, nexi ama chlorophos ayaa loo isticmaali karaa.
Weli waa xilliga dayrta ee farshaxanka tufaaxa waa muhiim ka tag suumanka dunta taas oo aan u oggolaaneynin in aan aboor ku haboon si ay uga baxaan ukumaha sare ee taajka geedka. Haddii ay u dhigaan garab geedka tufaaxa kaliya, guga waxaa si sahlan loo burburin doonaa daaweynta xalka nitrophene.
Abhid cagaaran on geedka tufaaxa, waxa la sameeyo
Faashad Cagaaran waa arrin aad u adag in la ogaado marxaladaha hore ee lesion, tan iyo cayayaankani waa mid aad u qulqulaya. Laakiin taasi kama horjoogsanayso in la burburiyo beerta oo idil, gaar ahaan geedo yar yar, iyo cayayaanka kuwan dhirta tufaaxa ayaa ah kuwa ugu firfircoon uguna khatarta guga.
Calaamadaha ugu horreeya ee aphids ayaa caleemaha la qallajiyey oo la qalajiyey caleemaha, sida aphids feed on dheecaanka ee burooyinkeeda iyo caleemaha yar yar. Xaaladdan oo kale, cayayaanku wuu badiyaa, si dhakhso ah ayuu isu bedbeddeli karaa oo wuxuu badali karaa 20 jiilna hal xilli-xagaaga. Mid kasta oo labaad wuxuu awoodaa inuu koro baalashiisa una dhaqaaqo geedka cusub.
Waa muhiim! Qaybaha Aphid waa beeral beertii, waa in sidoo kale si firfircoon u dagaalamaan.
Si loo yareeyo saameynta aphids iyo isku day inaad si gebi ahaan uga saarto geed, dhammaan geedaha tufaaxu waxay u baahan doonaan in lagu dhaqo biyo ka tuubo. Waxaa lagu talinayaa in la sameeyo hababka noocaas ah maalin kasta. Haddii aan ka hadleyno noocyada kala duwan ee geedaha tufaaxa, markaa way awoodaan ku buufin biyo saabuun leh (xalka, isticmaal 1 litir oo biyo ah iyo 200 garaam oo saabuunta dareeraha ah).
Ma taqaanaa? Dagaalka ka dhanka ah aphids ee tufaaxa iyo geedo kale oo beerta ah, waxaa lagu caawin karaa difaac dabiici ah, sida duqsiyada faleebada, ladybugs iyo dahab indhaha. Si loo soo jiito cayayaanka u dhexeeya dhirta, waxaa lagu talinayaa in lagu beero miro iyo alfalfa. Marka aad aragto badan oo cayayaanka faa'iido leh, beerashada qudaarta cawska in la gubo si ay u bilaabaan raadinta hoyga iyo cuntada ee geedaha leh aphids.
Sidee loo ilaaliyaa geedka tufaaxa ee ka sameysan barnarka?
Mediankakuwaas oo ku dhuftey geedo tufaax ah, sidoo kale loo yaqaan buug-yaraha. Laga soo bilaabo guga hore cayayaanka qaangaarka ah wuxuu leeyahay midab cagaar ah oo cagaaran ama cagaaran, laakiin xilliga dayrta waxay noqotaa casaan. Aad ayay u adagtahay in la ogaado qiyaasta, sababtoo ah dhererkeedu waa 0.3-0.4 cm.
Laakiin khatarta ah ee geedaha tufaaxa waa dirxiga liinta leh ee medyka, taas oo waqti ka dib noqon kartaa cagaar-buluug. Waxay si firfircoon ugu quudiyaan juuska ka soo caleemaha, kuwaas oo aan xitaa lahayn wakhti ay ku dhalaalaan, oo ka tagaan dhibco dhajis ah goobaha lesionka, kuwaas oo isku dhejiya caleemaha iyo burooyinkeeda. Dhibcahaasi waxay sidoo kale keenaan horumarinta fungus.
Marka dib loo duubo geedka qaangaarka ah, dadka waawayni waxay ku wareegayaan beerta oo dhan, laakiin xilliga dayrta waxay ku noqdaan geedka tufaaxa si ay ukumaha u dhigaan.
In dagaalka ka dhanka ah rinjin, tinctures aad u waxtar badan oo laga sameeyey basbaas qadhaadh. Qulqulka beerta leh qiiqa tubaakada ayaa sidoo kale caawiya. Si arrintan loo sameeyo, waxay ku faaftaa cawska qoyan ee cawska iyo tubaakada caleemaha korkeeda oo ay ka dhigaan dabka qaboojiyaha. Maadaama ay cawsku kaliya dhuuqayso, fumigga wuxuu socon karaa ilaa 3 saacadood.
Laga soo bilaabo nidaamka noocan oo kale ah, kalluunku wuxuu hoos u dhacayaa, taasina waa sababta ay muhiim u tahay in la qodo dhammaan ciidda hoosteeda ee geedaha tufaaxa dhammaadka, si looga hortago cayayaanku dib u soo kabashada.
Siyaabaha loola dagaallamo waraaqaha
Duufaanka xaashida dad badan la yiraahdo balanbaal qabow caleensababta oo ah inta badan nolosheeda cayayaanka waa balastar yar oo leh baalal madow mugdi ah.
Laakiin khatartu maaha mid aan dhicin, laakiin mugdi madow oo cagaar ah-cagaaran oo ku quudiya caleemo tufaax ah. Xilliga xagaaga ayaa kuu ogolaanaya inaad si ammaan ah u bedesho jeexitaanka 4-aad ee aboorada, taas oo aad u halis u ah xayawaanka tufaaxa.
Waxaa suurtogal ah in ay aboor ku dhejiso macnaheeda kiimikada, laakiin daawooyinka noocan oo kale ah waxay si xun u waxyeeleeyaan geedka iyo miraha. Sidaa darteed waxaa habboon in la isticmaalo qadhaadhtaas oo aad diyaarin kartid faleebo ama dib-u-hagaajin ah oo lagu buufin karo:
Wixii ah geedka qolofta waa in si weyn loo jarjarey, buuxinta nus baaldi ah 10 litir. Dhammaan tani waxay ka buuxsameysaa biyo qabow waxaana la adeegsadaa 24 saac oo kaliya. Taas ka dib, dareeraha, oo ay weheliso dixiriga, waa la kariyaa, sifeeyaa, laba jeer qallajiyey, waxaana loo isticmaalaa buufinta.
Shaah qallalan ayaa la jajabinayaa maraq, taasoo u baahan 1 kg oo keliya karkarinta 10 litir oo biyo ah. Ka dib 15 daqiiqo oo karkaraya, dareeraha waa in la qaboojiyaa waxaana loo isticmaali karaa mashiinka. Nidaamka waa in lagu celiyaa saddex jeer toddobaadkii. Si kor loogu qaado maraq, waxaad ku dari kartaa 40 garaam oo saabuun ah ama 1 kg oo qashin ah, oo 2-3 maalmood loo rogay.
Ma taqaanaa? Goobaha xayawaanka, oo ku wareegsan oo qulqulaya qadhaadh qadhaadh ah, ayaa aad ugu dhowdahay inay saameyn ku yeelato caleen-qabatada apple, tan iyo xataa urta warshaddan ayaa ka ilaalisa cayayaanka. Intaa waxaa dheer, infusions of gormwood yihiin wax ku oolka ah ee ka dhanka ah Baalallay, majarafadaha, Baalallay iyo sawflies.
Sidee loo baabiiyaa aboorka tufaaxa?
Moodoo saameeya dhirta tufaaxa, waxay aad ugu egtahay baro joogto ah iyo tallaabooyin ilaa 2 cm. Khatarta ugu weyn ee ay ka dhalatay waa jeexitaanka hilibka caleemaha, taas oo si lama filaan ah u horseedi doonta dhimashadooda. Sidoo kale caleemaha la dhalaalay caano gacmeed xitaa xitaa lama iloobi karin.
Haddii beerta uma imanayso badbaadada, waxay noqon kartaa mid dhali karta, oo kaliya caleemo qoyan ayaa lafiiri doona laamihiisa.
Si loola dagaalamo on geedaha tufaaxa, waa wax ku ool ah in ay soo ururiyaan qafis iyo gubi, iyo guga hore waa muhiim in laga saaro caleemo caleemo ka soo geed, kaas oo sidoo kale hides qotonka. Sidoo kale waa in aad ku buufisaa tufaaxa xalka lafaha cas iyo shag, taas oo aad u baahan tahay:
bac ah (10 g) oo ah basbaaska cas;
dhalo kaneecada kalluunka ah;
toonta iyo cagaarka basasha;
10 litir oo biyo ah.
Dhammaan qaybaha waa in ay soo wada ururiyaan 72 saacadood, ka dibna waxaa la isticmaali doonaa. Waxa keliya oo muhiim ah in buufinta la fuliyo ka hor inta caleemaha ugu horreysa ay ka muuqdaan burooyinkeeda geedka tufaaxa.
Xakamaynta cayayaanka iyo geedaha tufaaxa, waxaa muhiim ah in lagu buufiyo beerta waqti si looga hortago inay faafaan. Xitaa haddii aadan ogaanin raadinta weerarka beertaada, waa inaadan ka tagin tallaabooyin ka hortag ah, sababtoo ah cayayaanka badan ee duulaya waxay ku dhufan karaan geedahaaga tufaaxa bartamihii xilli-ciyaareedka, oo ka yimid beerta deriska ah.